Ven. Ashin Kawwida Open Letter to His Holiness Dalai Lama over wrongly condemning english/burmese | democracy for burma
tags: Burma, burmese buddhist monks, Canada, critics, Holiness Dalai Lama, International Burmese Monks Organization, Myanmar, NEW YORK, open letter, Tibet, Ven. Ashin Kawwida, wrongly condemning
= = = နိုဗယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားထံ ပေးပို့ထားသော မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ မေတ္တာရပ်ခံ လျှောက်ထားလွှာ = = = (ဘာသာပြန်)
တိဗက်မြေတွင် တရားမျှတခြင်း ကင်းမဲ့မှုကို ခုခံတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့် တိဗက်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အတူတကွ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်လျှက်ရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျင့်သုံးဆောက်တည်နေကြသော မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များအား မှားယွင်းစွာ ရှုံ့ချထားသည့် အရှင်ဘုရား၏ မကြာမြင့်မီက မှတ်ချက်စကားများကို ဖတ်ရှုရသည့်အတွက် တပည့်တော်တို့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းများသည် များစွာမှပင် ၀မ်းနည်းကြရပါသည် ဘုရား။
ရည်ညွှန်းချက် – ဓမ္မသာလ၊ အိပ်ခ်ျပီ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၁၃ ၊
မေရီလန်း တက္ကသိုလ်၌ ပရိသတ်တစ်စုအား ပြောကြားသည့် မှတ်ချက်စကား၊ ၇ မေ ၂၀၁၃။
တပည့်တော်တို့ ထင်မှတ်သည်မှာ အရှင်ဘုရားသည် လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း အချို့ နှင့် တစ်ဘက်သတ် ရေးသားထုတ်ပြန်ထားသည့် အစွန်းရောက်များနှင့် အခွင့်အရေးသမားများ၏ လှည့်ဖြားလိမ်ညာထားသော ၀ါဒဖြန့်မှုများ အပေါ်တွင် အခြေပြုထားသည့် သတင်းမီဒီယာ အစီရင်ခံချက်များက လမ်းလွှဲလိုက်အောင် ပြုခြင်းကို ခံရတော်မူလေသည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။
မြန်မာနိုင်ငံသည် (၁၃၅)မျိုးသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနွယ် အုပ်စုများဖြင့် အာရှတိုက်တွင် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု အများဆုံး နေထိုင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံများ အနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ သမိုင်းကြောင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကွဲပြားခြားနားသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အုပ်စုများ အကြား အပြန်အလှန်လေးစားမှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်သည့် စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သော နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ သက်တမ်း ၂၀၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်သော ဆူးလေစေတီတော်၊ သက်တမ်း ရာကျော်ရှိသော ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ဗလီဝတ်ကျောင်းတို့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ နှင့်အတူ (မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး မြို့တော်) ရန်ကုန်မြို့ထဲ အရပ်၏ ဗဟိုတွင် ဘေးချင်းယှဉ်လျှက် တည်ရှိနေပါသည် ဘုရား။ ဟိန္ဒူဘာသာရေး ဘုရားကျောင်း တစ်ခုသည်လည်း ရန်ကုန်မြို့ထဲ အရပ်၌ ထို သမိုင်းဝင် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများအနီးတွင် ထီးထီးမားမား ရှိနေပါသည် ဘုရား။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလီ မူစလင် အမျိုးသား တစ်စုက ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းကလေး တစ်ဦးအား အုပ်စုလိုက် မတရား သားမယားပြုကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု စတင်ခဲ့ပါသည် ဘုရား။ (လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများ၊ ရှေ့နေများ၊ သမိုင်းပညာရှင်များနှင့် အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အပါအ၀င် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့်) လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က စုစုပေါင်း (၃၄၇)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး (၄၁၁)ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း နှစ်ဖက်စလုံးမှ သတင်းပို့သည့်အတိုင်း တင်ပြအစီရင်ခံခဲ့ပါသည် ဘုရား။ သေကြေဒဏ်ရာရရှိသူများအနက် ၆၀%မှာ မူစလင်များဖြစ်ပြီး ၄၀%မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ (သေကြေဒဏ်ရာရရှိသူများ အချိုးအစားနှင့် အလားတူစွာ) အိမ်ပေါင်း ၇၇၀၀ ကျော် ပျက်စီးခဲ့ရပါသည် ဘုရား။ ထို့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂၄)ကျောင်းနှင့် ဗလီ (၃၂)လုံးတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် လူအုပ်များက ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါသည် ဘုရား။
ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ ဆိုင်ရှင်နှင့် ရွှေလာရောင်းသူတို့အကြား အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပွားပြီး မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဇနီးမောင်နှံကို ဘင်္ဂလီလူမျိုး မူစလင် ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့် ဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့က ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားလာသော မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိတ္ထိလာမြို့မှ နောက်ဆုံး အကြမ်းဖက်မှုကို နောက်ပိုင်းတွင် ဗလီတစ်ခုအတွင်း၌ မူစလင်လူအုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော် တစ်ပါးအား ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းက အရှိန်မြင့်တက်လာအောင် ဖြစ်စေခဲ့ပါသည် ဘုရား။
စင်စစ်တွင် မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဘုန်းကြီးဟု ခေါ်ဆိုခြင်းခံနေရသော ဦးဝီရသူ အပါအ၀င် ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုသည့် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များနှင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဒေသခံများသည် မူစလင်များကို ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပြီး လက်နက်ကိုင် လူအုပ်များအတွင်း ပိတ်မိနေသော မူစလင် ရာပေါင်းများစွာအား ကယ်ထုတ်ခြင်းကိုပင် ပြုခဲ့ကြပါသည်ဘုရား။ သူတို့သည် မူစလင်များကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ကယ်ဆယ် ခေါ်ဆောင်လာကြပြီးလျှင် ယနေ့တိုင်အောင် အစာရေစာ ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလျှက် ရှိပါသည်ဘုရား။ အချို့သော မူစလင်များကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၌ ခိုလှုံခွင့်ကိုပင် ပေးထားပါသည်ဘုရား။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များသည် (ရန်ကုန်မြို့အနီးရှိ) ဥက္ကံမြို့တွင် နောက်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာသည့် မူစလင် ဘေးဒုက္ခခံစားရသူများကို အစားအစာနှင့် အခြား အထောက်အကူများ ပေးလျှက်ရှိပြီး အချို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် ခိုလှုံခွင့်ပေးလျှက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များက ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေကြပါသည် ဘုရား။
တိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင် နေထိုင်လျှက်ရှိနေကြရာ အများအပြားမှာ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစွာဖြင့် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဇာတိမြေတွင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂလီလူမျိုး မူစလင်များကြောင့် (တိဗက်မြေတွင် တိဗက်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် တရုတ် ကွန်မြူနစ်များ ကဲ့သို့ အလားတူ အနေအထားမျိုးဖြင့်) ဘေးဒုက္ခ ကြုံတွေ့ ခံစားရသူများ ဖြစ်လျှက် ရှိနေကြပါသည် ဘုရား။ ယခုအခါတွင် ရိုဟင်ဂျာများဟု ဆိုကြသော ဘင်္ဂလီ မူစလင်များသည် (ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် နယ်ချင်းစပ်နေသည့်) မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း မြို့နယ်များတွင် လူဦးရေ၏ ၉၅% ရှိနေပြီး မူရင်းဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှာ ယခုအခါ စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၅%ထက် နည်းပါးလျှက် ရှိနေပါသည် ဘုရား။
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များအား ရှုံချပြစ်တင်ထားသည့် အရှင်ဘုရား၏ မှတ်ချက်စကားများကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတော် မူပေးပါရန် တပည့်တော်တို့က တလေးတစား မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ဘုရား။
← Police Arrest Activist in Yangon after Protest Myanmar’s Ruined Judiciary System-video
MYANMAR: Observations at 18:00 16.5.2013, Cyclonic Storm (MAHASEN) has moved Northeast wards and centered at about (110) miles West-Northwest of Maungdaw →